लाखौं भ्रष्टाचार गर्ने ठेकेदार सास्ती भोग्ने सर्वसाधारण - Worldnews.com
सडक कालोपत्रे गर्दा गुणस्तरहीन सामग्री प्रयोग गरेपछि यति बेला सल्यानको श्रीनगरदेखि रुकुम मुसिकोटसम्मको सडक जीर्ण बन्दै गएको छ। राम्रो सामग्री प्रयोग गरेको भनी कमसखालको सामग्री प्रयोग गरेपछि कालोपत्रे उप्किएको छ।
सडक ओटासिगरेको ३ वर्ष नबित्दै ठाउँठाउँमा भत्किएर नालीमा परिणत भए पनि कसैको चासो नगएको
फेवाताल कब्जाको कुरा अहिलेको होइन। फेवातालको जग्गा अतिक्रमणको चर्चा लामो समयदेखि चल्दै आएको हो। विभिन्न पटक गरिएका अध्ययनले पनि ताल अतिक्रमण भएको देखाएका छन्। तर यो...
रुकुममा बाढीको सास्ति, जोखिममा यातायात
धनवीर दाहाल, रुकुम । लगातारको बर्षातका कारण रुकुमका बिभिन्न सडक अवरुद्ध भएका छन् । ग्रामिण सडकहरु पुर्ण रुपमा अवरुद्ध भएका छन् भने राप्ती लोकमार्ग अन्र्तगतका सडकहरु अनियमित...
दीपेन्द्र शर्मा, जाजरकोट सदरमुकाम खंलगाको न्युरोड नजिक १ महिनाअघि भत्किएको सडक मर्मत हुन नसक्दा जाजरकोटबासीलाई सास्ती भएको छ। भेरी नगरपालिका–३ न्युरोडमा पहिरो जाँदा १...
News of Nepal 2017-09-22
कठै यो दुर्दशाः सडक मर्मत नहुदा जाजरकोटवासी लाई सास्ती !
 डोरी लगाएर गाडी तान्दै यात्रुहरु  सडक मर्मतमा सरोकारवाला निकाय उदासहिन दिपेन्द्र शर्मा, जाजरकोट । सदरमुकाम खंलगाको न्युरोड नजिक १ महिना अघि भत्कीएको सडक मर्मत हुन नसक्दा...
News of Nepal 2017-09-20
सडक निर्माणमा ठेकेदारको चरम लापरवाही, पाँच महिना पनि टिकेन सडक
उत्तम नेपाल, भद्रपुर । ठेकेदार कम्पनीले गुणस्तरहीन निर्माण सामाग्री प्रयोग गरि निर्माण गरिएको सडक भासिन र भत्किन थालेको भन्दै स्थानीयले आरोप लगाएका छन् । कालोपत्रे सडक...
जाजरकोट, २२ भदौ । यहाँको भेरी नगरपालिका–३ न्युरोडमा पहिरो जाँदा १२ दिनदेखि यातायात अवरुद्ध छ । पहिरोले जाजरकोट–डोल्पा सडकको खलंगा–रिम्ना खण्ड भत्किएको छ । यातायात अवरुद्ध...
News of Nepal 2017-09-07
जाजरकोट, २२ भदौ । यहाँको भेरी नगरपालिका–३ न्युरोडमा पहिरो जाँदा १२ दिनदेखि यातायात अवरुद्ध छ । पहिरोले जाजरकोट–डोल्पा सडकको खलंगा–रिम्ना खण्ड भत्किएको छ । यातायात अवरुद्ध हुँदा यात्रु खलंगादेखि रिम्नासम्म चार पाँच घण्टा पैदल हिँड्न बाध्य छन् । दैनिक उपभोग्य वस्तु ओसारपसारमा पनि समस्या छ । पहिरोले पैदल यात्रीलाई आउजाउमा समेत जोखिम भएको छ । केन्द्रीय विद्युत् लाइन प्रसारणमा बाधा...
बेनी–दरबाङ सडक अबरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती
प्रताप बानियाँ, म्याग्दी । पश्चिम म्याग्दी भेगलाई जोड्ने जिल्लाको एकमात्र सडक बेनी–दरबाङ सडकखण्ड अबरुद्ध हुँदा सर्वसाधारणलाई सास्ती भएको छ । म्याग्दीको मङ्गला गाउँपालिका–२, बाबियाचौरको लाम्पाटामा सडकमाथी आएको पहिरोको कारण सडक अवरुद्ध भएको हो । यही साउनको पहिलो शनिबार राती सडक माथीबाट आएको पहिरोले सडक अबरुद्ध भएपछि दिनहुँ सडकमा गुड्ने सवारीसाधन, यात्रा गर्ने पदयात्री, यात्रु,...
खोटाङ । कालोपत्रेको काम थालिएको मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गत पर्ने खोटाङका विभिन्न सडकको काममा ढिलासुस्ती र गुणस्तरहीन भएको भन्दै नेकपा (माले)ले बिरोध जनाएको छ । ठेकेदार कम्पनीले सम्झौता मिति गुजार्दा पनि जिल्लाभित्र पर्ने मध्यपहाडी सडकखण्डमा पर्ने विभिन्न सडक कालोपत्रेका काम पूरा नगरेको र निर्माणाधीन सडक पनि गुणस्तरहीन भएको भन्दै नेकपा (माले), खोटाङले विरोध जनाएको हो । जिल्ला...
खोटाङ, (नेस) खोटाङस्थित दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाभित्र पर्ने दिक्तेल–पाथेका सडक खण्डको बिभिन्न स्थानमा पहिरो झरेपछि यात्रुलाई सास्ती भएको छ । गत जेठ–३० गते राती परेको भारी बर्षासँगै उक्त सडकखण्डको चार स्थानमा झरेको पहिरो हालसम्म हटाउन नसक्दा यातायात सेवा अवरुद्द हुनका साथै पैदल यात्रुलाई समेत...
नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डः समस्या ट्राफिक व्यवस्थापनको, दोस चालकलाई ?
चितवन, २९ भदौ । नारायणगढ–मुग्लिन सडकखण्डमा सडक बिग्रिएरभन्दा पनि चालकको लापरबाहीले गर्दा धेरै समय जाम हुने गरेको पाइएको छ । बीच बाटोमा गाडी रोकिँदा यात्रुले लामो समय लाममा बसेर यात्रा गर्न बाध्य हुनुपरेको छ । नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाले सडक राम्रो बनाएर र प्रहरीले सडक जाम हटाएर मात्र यो सडकखण्ड सहज बन्न नसक्ने देखिएको छ । चालकले सावधानी अपनाउन नसक्दा र नियमको पालना नगर्दा बढी...